Ilay Amboarako - Takila Malagasy
Ilay Amboarako (Jemmy ulrich Andrianin'Arison)
Mpanoratra: Jemmy ulrich Andrianin'Arison
Nitsidika : 2990
Sokajy: Fitiavana, Tantara foronina
Nitia anao aho hatry ny ela
Nankafy anao aho hatrizay
Kanefa ianao efa manana olon-tiana
Dia ilay Amboaranao hatrizay
Ny fitiavako anao
Manana fihetsem-po hafahafa aho raha vao nahita anao aho indray andro izay fa toa marary aok'izany ny ato anatiko, toa mitady handoa foana aho. Favinona loatra e ity mahazo ahy fa tsy mbola manam-pitiavana sy fihetsem-po toy izany aho? Tena marary aho raha vao nahita anao, tena mihetsika krizy loatra aho ka miezaka ny miala anao ka niezaka ny niala anao foana kanefa tsy nety tsy afaka ny hanao izany aho satria tena tiako ianao. Nefa mbola tena ontsa ny foko, ory ny Fanahiko. Tsy hitako intsony izay atao.
Marary aho e, tena marary satria ianao io tokoa no ilay tiako voalohany ary mbola tsisy toa anao raha mbola fitia. Fa dia nahoana loatra re no dia ianao no ilay Amboarako fa tsy olon-kafa? Tena mety ho ahy ve ianao sa mbola hiandry Amboara hafa?
Tena tsy mitsahatra ny mijery anao ary mandinika anao foana aho. Tena tsy misy vanona izay rehetra ataoko raha vao mahita anao. Tena tia anao ahoka tsy hitako intsony izay atao e. Tena marary mafy aminao ny foko kanefa tsy sahy ny hilaza izany aminao mivantana aho fa dia fa dia Nohezahako natao tamin'ny fihetsika sy fijerin'ny maso. Eny,mety ianao angamba ilay Amboarako , ilay nandrasako hatry ny ela. Tsy afaka aminao mihintsy ny saiko fa mbola manantena foana. Tsy haiko intsony izay atao, tsy haiko intsony izay Ambara fa tena tia anao aho kanefa toa tazako etosahady fa toa tsy tia ahy na nihevitra ny fitiavako akory ianao ka dia tsy sahiko notenenina taminao izany fihetsem-poko izany.
Tsy fantatro izay asiako ny tenako raha tsy eo ianao. Mila anao ny fiainako, mila anao ny foko, mila anao ny fitiavako. Eny ianao io mantsy no ilay tiako voalohany " Anja te ho eo anilanao mandrakariva aho na maraina na atoandro na hariva"
Efa iray volana sahady izay no nahitako anao sy nifandraisako taminao kanefa efa tapitra hatreo koa efa hifandao isika ary mety amin'ny herintaona mihintsy aza vao tafihaona koa indro anio tokoa ilay ora ilazako izany fihetsem-po izany aminao kanefa moa tsy mba fantatro akory fa hay kay ianao io efa manana olon-tiana, efa manana anjaram-pitia ilay mba hifalianao rahatrizay kanefa moa vao fantatro izany dia toa tezitra aok'izany ilay foko efa mba tony ka lasa nanao fiteny hafahafa taminao aho toa na'datsa anao foana ka tezitra tamiko tsy nety niresaka tamiko intsony ianao. Kanefa ankehitriny dia tena tsapako fa mafy izany fitiavana izany ka ny nitso-drano anareo no nataoko farany mba hanananareo ny soa sy ny tsara